Diyaar garowga Dabaaldega 13sano Guurada Puntland oo Si xowli ah u socota – SBC
Diyaar garowga Dabaaldega 13sano Guurada Puntland oo Si xowli ah u socota
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soconayay deegaano badan oo ka mid ah Puntland u diyaar garowga Dabaaldega 13sano guuradii ka soo wareegatay xiligii la aas aasay dowlada Puntland.
Qeybaha kala duwan ee bulshada, iyo Dowlada waxaa ay ka wadaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland diyaarinta munaasabado lagu xusayo maalintaas qiimaha u leh Puntland oo ku beegan 1da August ee Maalinta Beri ah.
Waxaa soconaya dhoolatusyo ay sameenayaan dadweynaha qeybahiisa kala duwan, iyadoo ciidamada Amaankuna ay siweyn ugu howlanyihiin in ay sugaan amaanka magaalooyinka goobaha ay ka dhacayaan munaasabadahaas.
Magaalada Baran oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolada Puntland waxaa maanta ka dhacay kulamo ku aadan u diyaar garowga maalinta 1da August,
Waxaa kulamadaasi ka hadlay saraakiil ka tirsan Dowlada Puntland iyadoona dadka reer Sanaag u sheegay in ay siweyn u soo dhaweeyaan maalintaasi 1da August.
Maalinta Beri ah ayay ku beegantahay Maalinta Xuska 13sano guurada Puntland waxaana lagu balamay in ay dadka isugu soo baxaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland iyagoona lagu wado in ciidamada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muujini doonaan Dabaaldeg aad u sareeya.
SBC International Baran.